Homepage - Main - BLI · Iskuulada Luqadaha ee Kanada
Kala hadal annaga, powered by LiveChat
Waa maxay sababta BLI?
Aqoonsiga iyo Xubinnimada
Dugsiga Hoose iyo Dugsiga Sare
Nidaamka Ka-Hakinta Ardayda
Diiwaangelinta Koorsada Habeenkii
Imtixaanka Meeleynta Faransiiska
Imtixaanka Meelaynta Ingiriisiga
Ingiriis & Faransiiska Kanada
Barashada noolasha · Barashada waxbarashada
Miyaad dooneysaa inaad ogaato khidmadda?
U noqo arday
Labo Goobo Amaan ah
Magaalada Montreal & Quebec
Montreal waa magaalo gaar ah. Magaalo ku taal luqadda iyo dhaqanka. Magaalad leh dhadhan yurub ah oo kaa dhaadhicin doonta maalinta koowaad.
Waa magaalo laba luqoodle ah oo ku yaala jasiiradda St. Lawrence River. Waa meesha ugu fiican ee lagu baranayo Ingiriis iyo Faransiis isla markaana iskudubarid naftaada dhaqanka.
Wax kasta oo aad dooratid inaad timaaddo, waxaa jira had iyo jeer wax xiiso iyo xiiso leh. Hadday tahay xagaaga, gu'ga, dayrta ama jiilaalka, had iyo jeer wax ayaa jira.
Quebec waa magaalo qurux badan oo qurux badan. Waa wadnaha dhaqanka Faransiiska ee Waqooyiga Ameerika. Qeyb ka mid ah qaaradda Yurub qaarada cusub. Majeerteen ku taal bangiyada St. Lawrence River, Quebec waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu quruxda badan dunida iyo caasimadda gobolka Quebec.
Tani waa taajir in taariikhda, dhismaha iyo caadooyinka leh rafcaan Yurub oo dhab ah.
Magaaladan ugu weyn Canadian waa 100% francophone, Quebec waa meesha ugu fiican ee aad isku kalsoon tahay luuqada isla mar ahaantaana ku raaxeeysa dhamaan magaaladan quruxda badan leh!
Barnaamijyo kala duwan oo kala duwan
BLI waxay bixisaa barnaamijyo kala duwan oo ku haboon baahidaada. BLI-da waxaad ka heli doontaa barnaamijka aad raadineyso.
Xulashada Guri Kala Duwan
Waaxda guriyeyntu waxay bixisaa fursado kala duwan oo aad adigu doorato.
Barnaamijka Bulshada ee la yaabka leh
Ku noolow luuqada aad baraneyso ka qaybqaadashada barnaamijkeena bulshada oo bixisa waxqabadyo weyn maalin kasta.
La-Talinta Khaaska ah
Waxaan hubinaynaa inaad hesho dhammaan taageerada aad u baahan tahay inta aad ku jirtid khibrad waxbarasho.
Caawimaadda Visa & CAQ
Haddii aad u baahan tahay fiisaha martida ama ruqsadda waxbarasho ee u imaanaysa Kanada, waxaan kaa caawin karnaa habka.
Waanu daryeeli karnaa caymiskaaga caafimaad, oo ah waajib ah dhammaan ardayda u imaanaya Kanada.
Waxaan kaa qaadeynaa oo kaa dhaadhicineynaa garoonkeena si aad u noqoto waayo-aragnimada safarka Kanada si fudud oo raaxo leh intii suurtagal ah.
Waxa ay ardaydeenu sheegaan
Mid ka mid ah waayo-aragnimada ugu wanaagsan ee aan abid soo martay. Anigu waxaan aad ugu faraxsanahay halkan Montreal aan xitaa ogayn in ay bilaabeen. Cuntada, dadka, meelaha, waxyaabaha aad sameyn kartid, waxyaabaha aad baraneyso, maalin kasta waxaad baraneysaa waxoogaa tariikhda Montreal si aad u fiican
Waxaan kugula talineynaa 100% waanan ku soo laabanayaa adigoon laban laabin
Ingiriis Arday - Mexico
Markii aan imid Canada, ma aanan aqoonin Ingiriis ama Faransiis. Ka dib markii ay qaadatay barnaamijka BLI Bilingual, xirfadahayga luqadeed ee labada luuqadoodba wax badan ayaa hagaagay. Maanta waxaan dhihi karaa AMA WAXYAABAHA
Arday laba-labbis ah - Brazil
Waxaan kuqornay BLI si aan u barto Ingiriis waxaanan noqday arday sare oo ka sareeya bilaha 6. Macalimiintu waa xirfad aad uwanaagsan waxayna hubiyaan inaad fahamto oo barato wax walba oo ay ku barayaan. Fasallada waa kuwo isdhexgal ah. Iskuulku wuxuu leeyahay arday ka kala yimid adduunka oo dhan, sidaas darteed waxaan awood u yeeshay in aan sameysto saaxiibo badan.
Ingiriis Arday - Kuuriis
Wadankii asalka ahaa
70, rue Notre-Dame O., suun 400
763, rue St-Joseph E., suuli 104
COPYRIGHT 2017 BLI · Iskuulada Luuqadaha ee Kanada, DHAMMAAN XAQ U LEEDAHAY